पृथ्वी राजमार्गमा पुल भत्कियाे, बाढी पहिराेले देशभर कहाँ के क्षति? – AayoMail
पृथ्वी राजमार्गमा पुल भत्कियाे, बाढी पहिराेले देशभर कहाँ के क्षति?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन ५ गते १७:३३
निरन्तरको वर्षाका कारण चितवन र धादिङ जोड्ने पृथ्वी राजमार्गस्थित मौवा खोला पुलमा क्षति पुर्याएकाे छ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका १० मा मौवा खोलामा आएकाे बाढीले धादिङपट्टी पर्ने सडक भत्काएको धादिङपाेस्टले जनाएकाे छ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका १० स्थित मौवा खोलाले ३ वटा घर बगाएको छ।
मौवाखोलाले अमृतबहादुर गुरुङसहितकाे ३ वटा घर पनि बगाएको समाचारमा जनाइएकाे छ। चितवान जोड्ने मौवाखोला पुलको पिल्लर साइटबाट पानीले खोल्दा सडकको पिच कटान भएकाे छ ।
चितवन र धादिङ जोड्ने मौवा खोला पुलको धादिङपट्टि पर्ने सडक बाढीले भत्काएको बेनीघाट रोराङ-१० का वडाध्यक्ष अम्बर गुरुङले जनाएका छन्। उनका अनुसार मौवा खोलाले पुलको छेउपट्टि कटान गरेकोले यातायात अवरुद्ध भएकाे छ।
गजुरी गाउँपालिका-२ फुर्केखोलास्थित पृथ्वी राजमार्गमा वर्षाको कारण पहिरो खसेर सोमबार बिहानदेखि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीबाट खटिएको टाेलीले सडक खुलाउन आवश्यक पहल गरिरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ।
त्य‍स्तै नेपाल प्रहरीले जनाएअनुसार देशका विभिन्न भागमा पहिराेका कारण सडक अवरुद्ध भएकाे छ।
पाल्पा, पूर्वखोला गाउँपालिका-१ सिलुवा र निस्दी गाउँपालिका-५ बेलडाँडास्थित तानसेन-रामपुर सडकखण्डमा अविरल वर्षाको कारण पहिरो खसेर सोमबार बिहानदेखि सडक बन्द छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर र प्रहरी चौकी जब्गादीबाट खटिएको टाेलीले सडक खुलाउन आवश्यक पहल गरिरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ।
मनाङ, नासों गाउँपालिका-१ म्यार्दी भीरस्थित बेसीशहर-चामे सडकखण्डमा ढुङ्गा झरेर सोमबार बिहानदेखि सडक अवरुद्ध बनेकाे छ ।
गोरखा, गोरखा नगरपालिका-२ कटुसघारीस्थित गोरखा आरुघाट सडकखण्डमा अविरल परेको वर्षाको कारण पहिरो झरेर सोमबार बिहानदेखि सडकमा पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ । प्रहरी चौकी कोखेआहालेबाट खटिएको प्रहरीले सडक खुलाउन आवश्यक पहल गरिरहेको जनाइएकाे छ।
गोरखा नगरपालिका-१२ सात किलो भन्ने स्थानमा अविरल वर्षाको कारण पहिरो आई अमरसिंह राजमार्ग सोमबार दिउँसोदेखि पूर्ण बन्द छ। प्रहरी चौकी बाह्रबिसेबाट खटिएको टाेलीले सडक खाेल्न पहल गरेकाे छ।
सोलुखुम्बु, दुधकुण्ड नगरपालिका-११ साल्मेस्थित सोलु-ओखलढुंगा सडकखण्डमा पहिरो खसेर सोमबार बिहानदेखि अवरुद्ध छ।
पाँचथर, फाल्गुनन्द गाउँपालिका-३ स्थित पाङग्रेभीरमा अविरल वर्षाको कारण पहिरो झरेर मेची राजमार्गको सडक सोमबार दिउँसोदेखि अवरोध भएको छ।
दार्चुला, महाकाली नगरपालिका-५ स्थित दार्चुला गोकुलेश्वर सडकखण्डमा आइतबार साँझ अविरल वर्षाका कारण पहिरो गई सडक आवागगमन बन्द भएकाे छ।